TheSpecialCollege | Sell Courses Online
Graduate with Unique in-depth Knowledge in Human Health & Natural Medicine
Having gained unmatched skills and unique medical knowledge that will surely enable you to make correct diagnosis and successfully treat human diseases, you will certainly be in high demand.
A great career in Natural Health
“Graduates of any of this courses will gain skills and the knowledge necessary to deal with, and successfully treat all forms of illiness”
“We teach New perspectives in Human body’s Anatomy, Function, Diseases, Pathogenesis, Diagnostics and the best Natural treatments”
Kulliyada TSC waxay bixisaa koorasyo caafimaad oo laga aqoonsan yahay wadanka ingiriiska. Shahaadooyinka ardaydu helayaana waxaa bixinaysa mid ka mid ah hay’adaha ugu waaweyn wadanka ingiriiska ee u xil-saaran sharci-siinta jaamacadaha, kulliyadaha iyo ansixinta koorasyada.
Kulliyadu waxay si khaas ah oo aan cid kale la wadaagin u bixisaa culuun caafimaad oo aan iyada oo kale meelna lagu dhigin. Kulliyadu waxay bixisaa laba kooras oo kala ah Level 6 Diploma in Nutritional Science oo u dhiganta digriiga koobaad (Bachelor’s degree) iyo Level 7 Diploma in Natural Health oo u dhiganta digrii-ga labaad ee Master’s degree. Faahfaahin iyo macluumaad buuxa oo ku saabsan koorasyadan waxaad ka helaysaa dusha sare ee website-kan..guji Meesha ay ku qoran tahay ‘koorasyada’ Labada koorasba waxaa lagu bixinayaa aalada internetka (online). Kooraysada ay kulliyadu bixiso intooda badan waxaa laga soo min-guuriyay baadhitaano lagu sameeyay xaaladaha caafimaad ee kumanaan qof oo buka, cilmi-baadisyo madaxbanaan oo si qoto-dheer loogu lafo-guray cudur-dhaliyeyaasha dhabta ah ee keena cudurrada, meelaha ay ka soo galaan jidhka iyo sida ugu haboon ee jidhka looga yareeyo ama looga dhammeeyo cudur-dhaliyeyaashaas.
Qofka ku guulaysta inuu dhammaysto Level 7 in Natural Health wuxuu muddo kooban ku heli doonaa aqoon iyo khibrad caafimaad oo khaas ah oo aan dunida inteeda kale laga helin. Qofka kooraskan qaataa wuxuu heli doonaa cilmi iyo xirfad uu si dhab ah ugu daweeyo dhammaan cudurrada ku dhaca ragga, haweenka iyo carruurta. Waxaad baranaysaa sida loo soo saaro loona xaqiijiyo cudurka qofka haya adigoo aan haddana wax qalab ah adeegsan. Haddaba ma aha dhakhtarnimada oo keliya waxa lagugu barayo kooraskan. Waxaad baranaysaa dawooyinka dabiiciga kuwa dunida ugu tayada iyo ammaanka badan ee aan lahayn wax waxyeelo ah. Waxaad baranaysaa sida loo soo xulo, meelaha laga helo, sida la isugu daro, la isuguna dheelli-tiro, sida loo package-gareeyo iyo qalabka la adeegsado marka la soo saarayo dawooyin heer sare ah. Markaad ku guulaysato dhammaysiga kooraskan (Level 7 Diploma in Natural health) waxaad noqonaysaa dhakhtar ka aqoon badan malaayiin dhakhtar oo dunida jooga mid cad iyo mid madowba, xataa kuwa shaqaynayay in ka badan 40 sanadood iyo kuwa haysta shahaadada ugu sarraysa ee PHD-da, waayo, kooraskani wuxuu si hufan oo dhammaystiran kuu barayaa siro, iyo xogo dunida ka qarsoon oo aan ilaa hadda laga ogeyn caaalamka meelnaba. Xogahaas oo ku saabsan jidhka qofka, cudurka, sababta keentay cudurka iyo dawada manfaca leh ee ka samaysan maadooyinka ay kula dagaallanto cudur-dhaliyeyaasha dhabta ah ee keenaya cudurka